ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: အခု လက်ရှိအခြေအနေမှာ အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးကို အရင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပြီး ပြီးတော့မှ ဒီမိုကရေစီရေးကို ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ပြောဆို (ရုပ်သံ)
အခု လက်ရှိအခြေအနေမှာ အာဏာရှင်စနစ် ဆန့်ကျင်ရေးကို အရင်လုပ်ကြရမှာဖြစ်ပြီး ပြီးတော့မှ ဒီမိုကရေစီရေးကို ဆောင်ရွက်ကြရမှာဖြစ်တယ်လို့ ဟံသာဝတီဦးဝင်းတင် ပြောဆို (ရုပ်သံ)
မှန်တာမှ သိပ်မှန်ပါ. အဘရာ ။
သူတို.အမှားလုပ်ခဲ.တာကို FOLLOW လိုက်တော.
လက်ပံတောင်းတောင် ဒေသခံတွေဆို ဒေါ်စုကိုအတော်
မုန်းသွားကြပြီ ။ သူတို.လည်းနစ်နာ ၊ တိုင်းပြည်လည်းနာ ၊
ကချင်နယ်မြေ ၊ ရှမ်းနယ်မြေ ၊ ရခိုင်နယ်မြေတွေမှာလည်း
NLD ၀င်တိုးဖို. အများကြီးခက်သွားပြီ ။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီ ကို တုံးနေတဲ.ဒါး လိုပစ်ထားတာလည်း မှားနေပါ တယ် ။
ကျွန်တော် က NLD ပုရိသတ်ပေမယ်. မြင်တာလေး
I agree with U Win Tin's belief. Annihilate Dictatorship first before we strive for Democracy. You cannot eat food if you are suffering from toothache. So you need to remove the tooth if you want to eat the food. This is an easiest example for us. It is not too late to get back our birthrights. Where there is will there is way and nothing is impossible. People should wake up now and prepare for the strike. Happy Birthday U Win Tin. May you live long and witness democracy prevails in our country.
ဘဘ ရဲ.အတွေးအခေါ် တွေဟာ အမှန်တရား ကို
လိုလားတဲ. ပြည်သူ တွေနဲ. တစ်ထပ်ထဲကျပါတယ် ။
ဝေဖန်ခြင်း ၊ ထောက်ပြခြင်း ဆိုတာ အတိုက်အခံ လုပ်တာနဲ.ကွာခြားပါတယ် ။
ရှေ.ဆက်ပြီး NLD ကို မှန်ကန်တဲ. နိုင်ငံရေးမဟာဗျူဟာ
လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်အောင် တည်.မတ်ပေးနိုင်ပါစေ ။